Global Voices teny Malagasy · 25 Janoary 2013
25 Janoary 2013
Tantara tamin'ny 25 Janoary 2013
Espaina: Seranam-piaramanidina Tsy Misy Voromby?
Eoropa Andrefana25 Janoary 2013
Tsy dia fandre mahazatra amin'ny vaovao misongadina ny resaka seranam-piaramanidina, raha tsy resahina ny loza an-habakabaka na misy ny fitokonana ataon'ny mpiasa ka mivadika ho afo fandiovana ho an'ny mpandeha izany. Na dia izany aza, manana seranam-piaramanidina iray malaza i Espaina, izay nivoaka tamin'ny gazety sy tamin'ireo lohatenim-baovao antserasera hatramin'ny...
Voapotsipotsitra Ny Taratasin'ny Filoha Tiorka Ho an'i Bangladesh
Azia Atsimo25 Janoary 2013
Tamin'ny volana lasa [bn] teo ny Filoha Tiorka Abdullah Gül no nandefa taratasy tamin'ny filohan'i Bangladesh. Ny votoaty ankapoben'ny taratasy dia fangatahana “famindram-po” ho an'ireo mpitarika Islamista hotsaraina noho ny fiampangana ho nanao heloka bevava nandripaka olona nandritra ny adim-panafahana an'i Bangladesh. Nosoratany moa fa raha voasazy ireo mpitarika ireo dia mety...
Iran: Heloka Bevava Ao Amin'ny YouTube, Famonoana Ho Faty Eo Imasom-bahoaka
Iràna25 Janoary 2013
Zatovolahy roa, Alireza Mafiha sy Mohammad Ali Sarvari, no novonoina ho faty notapahan-doha tao Tehran, Iran vao maraimbe tamin'ny 20 Janoary 2013 teo imason'ireo mpijery [tandremo: mampihoro-koditra ny sary] tonga nanatrika izany, araka ny filazan'ny Sampam-pahalalamabaovao Repoblika Islamika (IRNA). Heloka bevava sy YouTube Ny fisamborana ireo lazaina ho mpihetraketraka no laharam-pahamehana voalohany indrindra...